DHAGEYSO-: Dad isku dilay Toorey kadib muran dhul oo ku dhex maray deegaanka Ceelasha Biyaha. | RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Home / Somali News / DHAGEYSO-: Dad isku dilay Toorey kadib muran dhul oo ku dhex maray deegaanka Ceelasha Biyaha.	DHAGEYSO-: Dad isku dilay Toorey kadib muran dhul oo ku dhex maray deegaanka Ceelasha Biyaha.
April 20, 2017	Muqdisho- KNN- Ugu yaraan 2 qof ayaa dhintay 2 kalane waa ay dhaawacmayn kadib muran dhul oo dhex maray dadkaasi oo ku sugan deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka magaalada muqdisho.
Goob joogayaal ku sugan deegaankaasi ayaa KNN usheegay in 2 nin ay dhintayn kadib markii ay isku dhuftayn Toorey waxaana mid ka mid ah ku dhintay goobtaasi halka qofka kalane uu ku dhintay Cisbitaal ku yaala deegaankaasi.
Dhinaca kale waxaa dhaawac uu soo gaaray 2 wiil ay kala dhalayn 2 oday ee dhintay waxaana laga deyrinayaa Xaladooda Caafimaad, Ciidan ka tirsan kuwa maamulka Deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa ku baxay dagaalkaasi.